Eyes Ny Voninkazo - Famolavolana
Ny Voninkazo Vatolampy voninkazo ny Eyes amin'ny fotoana rehetra. Ny vatana oval dia rakotra volamena miaraka amin'ny fisokafana tsy ara-dalàna toy ny mason olombelona izay mikatsaka zavatra mahafinaritra amin'ny Zavaboary. Ny fijoroana ho toy ny filozofa. Mankafy ny hatsaran-tarehy voajanahary izany ary maneho an'izao tontolo izao ho anao alohan'ny na aorian'izay hanaovanao izany.
Anaran'ny tetikasa : Eyes, Anaran'ny mpamorona : Naai-Jung Shih, Anaran'ny mpanjifa : Naai-Jung Shih.
Ny Voninkazo Naai-Jung Shih Eyes